तराई / मधेस Archives - Page2of3- मूल्याङ्कन अनलाइन
मधेसी दलका उनन्साठीले संविधानसभा छाडे
तराई–मधेसको लडाईं आमनेसामने
भदौ २३, काठमाडौं । उत्पीडितहरुको मागलाई बेवास्ता गरी आन्दोलनलाई सत्ताको बुथले कुल्चेर जसरी पनि संविधान बनाउने धुनमा लागेका सत्तारुढ दलहरुलाई मधेसी दलहरुले संविधानसभा नै छाडेर आमनेसामने लडाईंको चुनौती दिएका छन् । मंगलवारसम्ममा तराई–मधेस तथा जनजातिका ५९ सभासद्हरु सम्विधानसभा वहिष्कार गरी सम्विधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग भइसकेका छन् । पेलेरै सम्विधान बनाउने कार्यको विरोधमा भदौ २२ गते मंगलवार फोरम लोकतान्त्रिकले औपचारिक रुपमै सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई पत्र दिई सो पार्टी संविधान लेखन प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गरायो । सभामुखको कार्य कक्ष सिंहदरबार गई फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुरमार गच्छदारले सो पत्र सभामुखलाई बुझाएका हुन् । संविधानसभा छाडेर जाने क्रममा यसअघि नै राजेन्द्र महतोको नेतृत्वकोपूरा पढ्नुहोस्
मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय
चैत्र २, काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा हिजो दिउँसो बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनपूरा पढ्नुहोस्
भाषा नबुझदा राना थारू महिलाले सेवा पाउँदैनन्
चैत्र १, कञ्चनपुर । भाषा नबुझ्दा कञ्चनपुरका राना थारू समुदायका महिला सरकारी कार्यालयबाट सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपाली भाषा नबुझ्दा सरकारी कार्यालयबाट राना थारू समुदायका महिला सेवा पाउनपूरा पढ्नुहोस्
समकालीन तीसरी दुनियाँ पत्रिकाका सम्पादक तथा भारतीय वामपन्थी पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्माले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दै र विश्लेषण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार बर्माको विचारलाई ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले प्रकाशनपूरा पढ्नुहोस्
धनुषामा मधेश आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै
भदौ २२, जनकपुर । तराई–मधेसमा अनिश्चितकालीन आमहडताल २४औँ दिनमा पुग्दा धनुषामा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको समाचार आजको नयाँपत्रिकामा छापेको छ । सोमबार दिउँसो लाठी जुलुस निकालेका प्रदर्शनकारीले मेघाउलमा रहेको कांग्रेसपूरा पढ्नुहोस्
मधेस आन्दोलन अझ चर्किने संकेत
भदौ २१, काठमाडौँ । काठमाडौँमा प्रमुख ३ दलको सहमतिमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुईतिहाइमा पारित हुने स्थिति बनिरहँदा तराई–मधेसमा भने त्यस प्रक्रियाविरुद्ध आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ । आजको नयाँपूरा पढ्नुहोस्
आन्दोलनकारीहरु सडकमा अझै उग्र
धनुषामा निरन्तर निषेधाज्ञा जारी
भदौ १६, जनकपुर । मंगलवार दिनभर स्वायत्त मधेस प्रदेश माग गर्दै सडकमा उत्रेका आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तनावग्रस्त बनेको धनुषाको जनकपुर वुधवार पनि अशान्त छ । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिकपूरा पढ्नुहोस्
मधेशी नेताहरुले लिखित पत्र बुझाए
शर्त मानेमा वार्तामा बस्न मधेशी मोर्चा तयार
भदौं १३, काठमाडौं । तराई–मधेशमा आन्दोलनरत बिभिन्न मधेशवादी दलहरु सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारले आह्वान गरे अनुसार वार्तामा बस्न चार शर्त अघि सारेको छ । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीलपूरा पढ्नुहोस्
के भन्छन् सिके राउत ?
‘मधेस भूगोलको सुखदुःख हाम्रो साझा कुरा हो’
भदौ ८, काठमाडौं । लामो समयदेखि मधेसमाथि नेपालको केन्द्रीय सत्ताबाट भइआएको क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि पटक–पटक राजनीति आन्दोलनहरु भए । दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धले क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाईपूरा पढ्नुहोस्
स्थानीयको प्रश्न : तल कफ्र्यु लगाइरहने, माथि संविधान बनाइरहने ?
टीकापुर घटना किन भयो ?
भदौ ७, काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरमा सोमबार भएको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । सुदूर पश्चिमलाई अखण्ड बनाउने नाममा थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै थारु समुदायलेपूरा पढ्नुहोस्